पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा ७ लघुवित्त, मर्जरमा जान दबाब बढ्यो | Ratopati
लघुवित्तलाई आईपीओ र बोनस सेयरबाट मात्रै पुँजी बढाउने विकल्प
personशंकर अर्याल exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १०, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार ७ वटा लघुवित्तले पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । पुँजी जुटाउने विकल्प अरु बन्द रहेको र तोकिएको चुक्तापुँजी पनि नपुगेको अवस्थामा ती लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरमा जानुपर्ने वा कार्यक्षेत्र खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको जनउत्थान लघुवित्त र १० जिल्ला कार्याक्षेत्र भएका घोडाघाडी लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र नेपाल एग्रो लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, बुद्धज्योति लघुवित्त र स्मार्ट लघुवित्तलाई यस्तो पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
एकीकृत निर्देशनमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक गरी २ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको लघुवित्तका लागि १० करोड र प्रादेशिक स्तरको लघुवित्तका लागि २ करोड रुपैंया न्यूनतम चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एउटा प्रदेश बाहिर कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तको जस्तै न्यूनतम १० करोड नै चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्छ । यही आर्थिक वर्षभित्र पुँजी नपुगेमा अर्को वर्ष प्रदेश बाहिरको जिल्लाका सबै कारोबार बन्द गर्नु पर्नेछ ।
यस्तो छ लघुवित्तको समग्र अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले ८४ वटा लघुवित्त संस्थाहरु अस्तित्वमा छन् । तीमध्ये ४३ वटा राष्ट्रियस्तर र १६ वटाले प्रदेशस्तरको लघुवित्तको रुपमा इजाजत प्राप्त गरेका छन् । २५ जिल्ला, २३ जिल्ला र १९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय संस्थाको संख्या १÷१ वटा छ । त्यस्तै, १० देखि १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ५ वटा, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ३ वटा, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका १३ वटा र एकदेखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका एउटा लघुवित्त छन् ।
राष्ट्रियस्तरको ४३ वटा लघुवित्त संस्थामध्ये असार मसान्तसम्म ३६ वटाको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये ४ वटा लघुवित्त राष्ट्रियस्तरको होलसेल कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ती लघुवित्तको चुक्तापुँजी ६० करोड भन्दा माथि नै छ । चुक्ता पुँजी पुग्न ८ वटामध्ये सबै लघुवित्तहरुको आईपीओ आउन बाँकी छ । आईपीओ ल्याएर न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनेगरी ती लघुवित्त संस्थाहरुले इजाजत पाएका हुन् ।
त्यसैले पुँजी नपुगेका यी संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकको यो प्रावधानले कार्यक्षेत्र विस्तारमा कुनै समस्या नपर्ने लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेशस्तरका १६ लघुवित्तमध्ये १० वटाको पुँजी पुगेको पनि बाँकी ६ वटाको चुक्ता पुँजी पुग्न बाँकी छ । तर, यी ६ वटाको आईपीओ समेत आउन बाँकी रहेको र सोपश्चात् चुक्तापुँजी पुरा हुने भएकोले ती लघुवित्तमा पनि समस्या छैन । बाँकी २५ वटा लघुवित्तले भने राष्ट्रिय वा प्रादेशिक रुपमा रुपान्तरण हुन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय वा प्रादेशिक भनेर नतोकिएका ती लघुवित्तमध्ये २५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको मिर्मिरेको असार मसान्तसम्म १९ करोड ५४ लाख चुक्ता पुँजी छ । अन्य प्राविधिक कारणले राष्ट्रियस्तर घोषित नभएको भए पनि यसलाई चुक्तापुँजीको समस्या छैन ।
त्यस्तै, २३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सूर्योदय लघुवित्तको चुक्तापुँजी २१ करोड ५० लाख छ । यो पनि राष्ट्रियस्तरको बन्न पर्याप्त चुक्ता पुँजी हो । चुक्ता पुँजी पुर्याएकै अवस्थामा पनि कतिपयले राष्ट्रियस्तरको बन्नका लागि निवेदन नै नदिएको, कतिपयको कारोबारमा कैफियत देखिएको र कतिपयलाई मर्जर गरेर आउन राष्ट्र बैंकले नैतिक दवाव दिएका कारण राष्ट्रियस्तरको मान्यता पाउन नसकेको हो ।
१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको जनउत्थान लघुवित्तको पुँजी भने अहिलेसम्म पनि ७ करोड ९२ लाख मात्रै छ । यो वर्ष २७ प्रतिशत लाभांश दिन सक्यो भने मात्रै यसको चुक्ता पुँजी १० करोड पुग्न सक्छ । कुल ६ वटा प्रदेशका जिल्लामा कार्यक्षेत्र फैलिएको यो लघुवित्तले यो पुँजी पुर्याउन नसक्ने हो भने ५ प्रदेशका ८ जिल्लाको कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ ।
त्यसबाहेक १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ५ लघुवित्तमध्ये सबैसँग राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त बन्न पर्याप्त पुँजी छ । त्यसैले ती लघुवित्त संस्थालाई पुँजी वृद्धिको कुनै समस्या छैन । महुली, उन्नति सहकार्य, आरम्भ, समिट र मिथिला लघुवित्त यसअन्तर्गत पर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको १० जिल्ले तथा ४–१० जिल्ले वर्गमा रहेको १६ वटा लघुवित्त संस्था छन् । समता, जाल्पा र महिला लघुवित्तलाई १० जिल्ले लघुवित्तको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमध्ये समता लघुवित्तसँग अहिले नै राष्ट्रियस्तरको बन्न पर्याप्त चुक्तापुँजी छ ।
जाल्पा लघुवित्तले पनि ३० प्रतिशत आईपीओ ल्याएर १० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्छ । महिला लघुवित्तको कार्यक्षेत्र प्रदेश ५ मा मात्रै रहेको र प्रदेशस्तरको लघुवित्त बन्न पर्याप्त पुँजी भएकोले यसलाई पुँजी पुर्याउने दवाव छैन ।
त्यस्तै, ४–१० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्तको संख्या १३ वटा रहेको छ । त्यसमध्ये ७ वटा लघुवित्तलाई पुँजी पुर्याउने समस्या छैन । ४ वटा लघुवित्तसँग राष्ट्रिय स्तरको बन्न पर्याप्त पुँजी पुगिसकेको छ । २ वटा लघुवित्तले आईपीओ जारी गरेर १० करोड पुँजी पुर्याउन सक्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, अर्को एउटा (स्पर्श लघुवित्त) लघुवित्तले लाभांश दिएर १० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्छ । स्पर्शले यो वर्ष ६३ लाख रुपैंया बराबरको बोनस शेयर दिन सक्यो भने पुँजी १० करोड पुग्छ । त्यसका लागि पर्याप्त नाफा स्पर्शसँग छ ।
बाँकी ६ वटा लघुवित्त भने मर्जरमा नजाने हो भने प्रादेशिक स्तरमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्मार्ट लघुवित्त, बुद्धज्योति लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, घोडाघोडी लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र नेपाल एग्रो लघुवित्त यसअन्तर्गत पर्छन् ।
स्मार्ट र बुद्धज्योतिको आईपीओ आउनै बाँकी छ । तर, ती लघुवित्तले आईपीओ जारी गरे पनि त्यसपछिको पुँजी प्रादेशिक लघुवित्तका लागि मात्रै पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले आफ्नो प्रदेश बाहिरका जिल्लाको कार्यक्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मार्ट लघुवित्तले कैलाली र बुद्धज्योतिले मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाको कार्यक्षेत्र गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै, स्वाभिमान लघुवित्तलाई पनि पुँजी पुर्याउन कठिन छ । हाल ७ करोड ६७ लाख पुँजी भएको सो लघुवित्तलाई १० करोड पुँजी पुर्याउन थप २ करोड ३३ लाखको पुँजी थप गर्नुपर्छ । तर, सो पुँजी पुर्याउन सम्भव देखिँदैन । पुँजी पुर्याउन नसक्दा सो लघुवित्तले स्याङ्जा जिल्लाको कार्यक्षेत्र गुमाउने अवस्था देखिन्छ ।
त्यसबाहेक घोडाघाडी लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र नेपाल एग्रो लघुवित्तले पनि तोकिएको समयमा राष्ट्र बैंकले भनेबमोजिम चुक्तापुँजी पुर्याउने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा मर्जरमा नजाने हो भने नेपाल एग्रोले ५ जिल्ला, घोडाघोडीले ४ वटा र सपोर्टले ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । १० जिल्ले लघुवित्तका लागि यो भनेको ३० देखि ५० प्रतिशत कार्यक्षेत्रको हिस्सा हो ।
समाज लघुवित्त अहिले ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको एकमात्रै संस्था हो । प्रदेश २ अन्तर्गत धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी कार्यक्षेत्र भएको समाज लघुवित्तले आईपीओ जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेको छ । त्यसैले यसलाई समस्या छैन ।
पुँजीवृद्धिको अरु विकल्प किन छैन ?
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै लघुवित्तको संख्या घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई पुँजीवृद्धिका लागि सीमित विकल्प मात्रै खुला राखेको छ । अहिले लघुवित्त संस्थाले आईपीओ र बोनस शेयरबाट मात्रै पुँजी बढाउने विकल्प खुला राखेको छ । एफपीओ, हकप्रद शेयर लगायतको स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ ।
आईपीओ अहिलेसम्म साधारण शेयर निष्कासन नगरेका लघुवित्तका हकमा मात्रै लागु हुने भएकोले यो विकल्प रोज्नसक्ने अवस्था सबै संस्थालाई छैन । बोनस सेयर दिन पनि पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसमाथि लघुवित्तहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ । सोभन्दा बढी लाभांश दिँदा थप लाभांश रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम विभिन्न कोषहरुमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको विकल्पमा गरिएको कडाई, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था, सहुलियत दिने व्यवस्था, क्रस होल्डिङसम्बन्धी व्यवस्था र बजार प्रतिस्पर्धाका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा मर्जरको क्रम बढेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र लघुवित्तको संख्या ७०÷७१ मा सीमित हुने उनको अनुमान छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर कास्की जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा
पर्यटनमन्त्रीद्वारा विपन्न नागरिकको कोरोना बीमा
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा विर्तामोडस्तिथ परोपकार तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई विद्युतीय उपकरणहरु प्रदान
कामना सेवा उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान
नेकपा नेता पन्तको शल्यक्रिया सफल
काठमाडौं उपत्यकामा थप ५४८ जनामा संक्रमण पुष्टि
थप १२५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २५ को मृत्यु